Global Voices မြန်မာ » အဆဲန့်(ချ်) နိုင်ငံ​ရေး​ခိုလှုံ​မှု​အတွက် အီ​ကွေ​ဒေါ​၏ တုံ့​ပြန်​မှု · Global Voices မြန်မာ » Print
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 20 ဩဂုတ် 2012 2:08 GMT 1	 · ရေးသား​သူ Gina Yauri Translated (en) by Negarra Akili, KyawMyoKhaing
အမျိုးအစားများ: လက်တင်အမေရိက, ဗြိတိန်, အီကွေဒေါ, ဒစ်​ဂျစ်​တက်တက်​ကြွ​လှုပ်​ရှားမှု, ပြည်သူသတင်း, လွတ်လပ်​စွာ​ပြော​ဆိုခွင့်, အထူးသတင်း
ဝီကီလိ(ခ်)တည်ထောင်သူ၊ ဂျူလီယန် အဆဲန့်(ချ်)သည် ဇွန်လ ၁၉ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှစ၍ လန်ဒန်ရှိ အီကွေဒေါသံရုံးတွင် ပိတ်မိ နေသည်။ ကျွန်မတို့ အစောပိုင်းတွင် သတင်းပို့ခဲ့သကဲ့သို့ပင်  ဩဂုတ်လ ၁၆ရက်နေ့မနက်တွင် အီကွေဒေါက ဝီကီလီ(ခ်)ဖန်တီးသူအား သံတမန်ရေးအရ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရီကာဒို ပါတီနိုက ကြေညာခဲ့သည်။ အီကွေဒေါက ၄င်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကြောင်းချက် ၁⁠၁ခု ပေါ်တွင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဘီဘီစီက သတင်းပို့ပုံအရ  ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝီလီယမ်ဟေ့(ဂ်) က အဆဲန့်(ချ်)အတွက် အီကွေဒေါသံရုံးကို ထွက်ခွာရန် လုံခြုံသောလမ်းကြောင်းကို ဗြိတိန်ကအာမခံပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပြီး ယူကေ၏ တရားဝင်တာဝန်ရှိမှုမှာ သူ့ကိုဆွီဒင်ထံလွှဲပြောင်းအပ်နှံရန်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆဲန့်(ချ်)ကို ၂၀၁၀တွင် စွဲဆိုထားသော လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနှစ်ခု အရ ဆွီဒင်အာဏာပိုင်များက အလိုရှိနေသည်။ ထိုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆွီဒင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဖမ်းဝရမ်းအရ ဗြိတိန်ရဲများက အဆဲန့်(ချ်)ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ရက်၊ ၂၀၁၀တွင် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခွင့်မပြုသော အာမခံရခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အသံ ရှေဆောင်ပြောဆိုမှု တွင် ရီနာတာ အဗီလာက ရှင်းပြထားပုံအရ
နိုင်ငံတကာမျှတသောတရားရေးအဖွဲ့ ၏ အဆိုအရ အာမခံရနိုင်ဖွယ်ရာမရှိသော ပြစ်ဒဏ်မချမှတ်ရသေးသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနှစ်ခုအတွက် ဆွီဒင်ကို တရားခံလက်ပြောင်းပေးနိုင်မှု အား အဆဲန့်(ချ်) ရင်ဆိုင်နေရသည်။ နောက်ဆုံးအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်  လျှောက်ထားရန် သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အီကွေဒေါသံရုံးသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ရာဖေး(လ်) ကော်ရီယာက ထိုကိစ္စကို သုံးသပ်နေချိန်တွင် သူကသံတမန်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုအောက်တွင် နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အီကွေဒေါအစိုးရက နှုန်းအရရော ပြင်းထန်မှုအရပါ မကြုံဖူးသော ဝီကီလိ(ခ်)၊ ယင်း၏တည်ထောင်သူနှင့် လုပ်အားပေးသူများအပေါ်တွင် ယခင်က တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် လက်ရှိ တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် မူတည်၍ ၄င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။
ဩရာ နျူရိုတိကာ  ဘလော့(ဂ်)မှ အယ်ဖရန် ဂွေရယ်ရိုက အဆဲန့်(ချ်)အတွက် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးကြောင်း မကြော်ငြာမီတွင် ထိုအမှုအကြောင်း ရေးခဲ့သည်။ အယ်ဖရန်က နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရခဲ့ပါက အဆဲန့်(ချ်)အတွက် ရွေးစရာလမ်းနှစ်သွယ်ကို ရှင်းပြထားသည်။
အီကွေဒေါလူမျိုးများ၏ တွစ်တာတုံ့ပြန်မှုမှာ ရောထွေးနေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မာအူရီစီရို ရိုဒရီဂွက်(ဇ်) (@maurisec ) [es] ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်မှာ
@maurisec : #asiloassange  Bien sustentados “argumentos” del asilo pero no lo justifica. No m siento representado x estos “dignatarios” y sus decisiones
(@maurisec ) [es]၊ #asiloassange  နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကို ထောက်ခံပြောဆိုတာတွေကတော့ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို အာမခံမပေးသေးဘူး။ ငါကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအစိုးရနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ မခံစားရဘူး။
အိုင်ဗန်နာ ရိုဒရီဂွက်(ဇ်) မိုရီ (@irodriguezmori ) [es]က အီကွေဒေါအစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သဘောမတူကြောင်းပြသသည့် တွစ်တာစာတိုများစွာ ကို ရေးသားခဲ့သည်။
@irodriguezmori  [es]: Rebuscar leyes internacionales para otorgar asilo o velar por los derechos de una persona que no lo merece. Ese es mi Ecuador.
@irodriguezmori  [es]၊ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့ ဒါမှမဟုတ် အခွင့်အရေးရဖို့မသင့်တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် အခွင့်အရေးပေးဖို့ နိုင်ငံတကာဥပဒတွေကို ရှာနေတယ်။ ဒါငါရဲ့ အီကွေဒေါပဲ။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်ကို ကိုးကား၍ ဂျော့(ချ်) ဂွန်ဇာလက်(ဇ်) (@clever_george ) [es] က ရေးသားခဲ့သည်မှာ၊
@clever_george : #AsiloAssange , hablan tanto de libertad de expresión cuando en nuestro propio país NO EXISTE!!!
@clever_george  [es]၊ #AsiloAssange ၊ နိုင်ငံထဲမှာကျ မရှိတဲ့ လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်အကြောင်းကို သူတို့အရမ်းပြောနေကြတယ်။
သတင်းထောက် ဆာဗီအာ ရေး(စ်) (@xavivire ) [es] က ကွစ်တိုမှနေ၍ မေးသည်မှာ
@xavivire : El presidente q rompe periódicos, q enjuiciaeinsultaaperiodistas, q solo acepta SU verdad da asiloa#Assange … ¿Paradojas? ¿intereses?
@xavivire  [es]၊ သတင်းစာတွေကို ဖျက်ဆီးပြီး စာနယ်ဇင်းတွေကို ဖိနှိပ်စော်ကားတဲ့ သမ္မတက #Assange အတွက် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးတယ်၊ … ရွဲ့နေတာလား၊ စိတ်ဝင်စားလာတာလား။
သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သူ မာစီ ရေရာ (@marceriera ) [es] ကလည်း ဆင်တူသော မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးသည်မှာ၊
@marceriera : Y los periodistas ecuatorianos seremos igualmente defendidos por el gobierno en algún momento??? #AsiloAssange 
@marceriera  [es]၊ ပြီးတော့ အီကွေဒေါသတင်းထောက်တွေကိုရော တစ်ချိန်⁠ချိန်မှာ အစိုးရက ဒီလိုအပြုအမူမျိုးနဲ့ ခုခံကာကွယ်ပေးမှာလား။ #AsiloAssange 
သို့ရာတွင် ယင်းအကြောင်းအရာပေါ်တွင်ပင် ကာလို့(စ်) ဝီးကပီ ‏(@ve_to ) [es] က တွစ်တာစာတို တင်ခဲ့သည်မှာ၊
@ve_to : Todos los Periodistas Ecuatorianos se Creen Igual de victimas #asiloassange 
@ve_to  [es]၊ အီကွေဒေါ သတင်းထောက်တွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ တရားခံလို့ ယုံကြည်နေကြတယ်။ #asiloassange 
တွစ်တာအသုံးပြုသူ အများအပြားက အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ချီလို မော်ရယ်ရာ (@moreirachelo ) [es] က
@moreirachelo : Lo felicito una vez mas Presidente q orgullo ser ecuatoriano y q nos represente se ve lo humanista q es al darle #asiloassange  @MashiRafael 
@moreirachelo  [es]၊ သမ္မတကို နောက်တစ်ကြိမ် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အီကွေဒေါဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ် ပြီးတော့ ခင်ဗျားက ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အဆဲန့်(ချ်)အတွက် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ပေးလိုက်တာက ခင်ဗျားရဲ့ လူသားဆန်မှုကို တွေ့လိုက်ရတာပဲ။ #asiloassange  @MashiRafael 
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဟိုဆေး ရာဖယ်(လ်) (@raphael7252 ) [es]နှင့် ဖယ်(လ်)ပီ အော်တစ်(ဇ်) (@Felo_777 ) [es] တို့၏ သက်သေထူချက်အရ အဆဲန့်(ချ်)ထောက်ခံသူများက အီကွေဒေါတွင် ပျော်ရွှင်နေကြသည်။
@Felo_777 : Julian Assange es un héroe contemporáneo #freeassange #asiloassange 
@Felo_777  [es]၊ ဂျူလီယန် အဆဲန့်(ချ်)က လက်ရှိသူရဲကောင်းပါပဲ #freeassange #asiloassange 
@oscgamb  [es]ကဲ့သို့ အခြားသူများကလည်း ပျော်ပွဲဆင်နွဲခဲ့ကြသည်မှာ၊
@oscgamb : que viva ecuador como patria soberana!!! #Asiloassange 
@oscgamb  [es]၊ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် အီကွေဒေါ အဓွန့်ရှည်ပါစေ။ #Asiloassange 
အယ်(လ်)ကော်မာစီယို  [es] သတင်းစာက အဆဲန့်(ချ်)၏ မိခင်ဖြစ်သူ ခရစ္စတင်း အဆဲန့်(ချ်)က အီကွေဒေါနိုင်ငံအား နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့သည်၊ “သို့ရာတွင် သူသား၏ ကံအတွက် စိုးရိမ်နေကြောင်း”လည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အီကွေဒေါနိုင်ငံက တောင်အမေရိကနိုင်ငံများ သမဂ္ဂ (UNASUR )၊ ကျွန်ုပ်တို့ အမေရိကပြည်သူများအတွက် ဘိုလီဗီယန်း အဖွဲ့ (ALBA )နှင့် အမေရိကန် ပြည်နယ်များ အဖွဲ့ (OAS )တို့နှင့် အဆဲန့်(ချ်)၏ အမှုကို ဆွေးနွေးရန် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး  ခေါ်ယူခဲ့သည်။
URL to article: https://my.globalvoices.org/2012/08/161
 ကျွန်မတို့ အစောပိုင်းတွင် သတင်းပို့ခဲ့သကဲ့သို့ပင်: https://globalvoicesonline.org/2012/08/16/ecuador-grants-wikileaks-founder-julian-assange-asylum/
 သံတမန်ရေးအရ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်: http://www.bbc.co.uk/news/uk-18521881
 အကြောင်းချက် ၁⁠၁ခု: http://wikileaks-press.org/press-conference-with-foreign-minister-ricardo-patino-aroca-ecuador-grants-asylum-to-julian-assange-english-translation/
 ဘီဘီစီက သတင်းပို့ပုံအရ : http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120816_ultnot_hague_asilo_assage_msd.shtml
 ဆွီဒင်ကို တရားခံလက်ပြောင်းပေးနိုင်မှု: http://www.aklagare.se/In-English/Media/The-Assange-Matter/
 ဩရာ နျူရိုတိကာ: http://auraneurotica.blogspot.com/2012/08/sobre-el-asunto-assange.html